Bitcoin Pizza Day - Binance dia manolotra BTC Pizza - Cazoo $ 52.200
Home » Home » Andro Bitcoin Pizza - Manolotra BTC Pizza $ 52.200 i Binance
tenifototra: Andro piraingo an'i Bitcoin
Fotoana famakiana: 4 minuti
Mitranga isan-taona izany, Bitcoin Pizza Day! Tsy fantatrao ve izany? Io tsingerintaona io izay nankalazaina nanomboka, tamin'ny 18 Mey 2010, nisy bandy iray tao amin'ny forum iray nandoa bitcoin 10.000 ho an'ny pizza. Pizza antsasa-tapitrisa dolara…. horohoro. Araho ny adiresy hahitanao ny hafatra tany am-boalohany an'ny mpampiasa laszlo. Ny vondrom-piarahamonina internet, mamy sy miahy, noho izany mankalaza ny Andron'ny Bitcoin Pizza isan-taona amin'ny 18 Mey! Manantena aho fa manankarena kokoa noho i Scrooge Scrooge i lazlo, ary nalain'ity angady ity izy.
Na ahoana na ahoana, Binance dia nanomana promo manokana Collect & Win ho an'ny mpikambana Binance rehetra izay nanangona tamim-pahombiazana ireo singa dimy manokana hanamboarana ny Bitcoin Pizza: amin'izany fomba izany dia azo atao ny mitaky ny anjaran'izy ireo amin'ny loka $ 52.200 $ ao amin'ny BTC.
Sambany ve ianao mamaky ao amin'ny Cazoo? Tongasoa!
Mandika naoty sy fikarohana avy amin'ny tontolon'ny crypto aho. Ity no tanjoko. Hatramin'izay dia mampiasa Binance aho, raha mieritreritra ny hisoratra anarana ianao dia mangataka anao hanao izany amin'ny kaody referansa https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (id referral: EV6X8DW5) ary hanana komisiona fihenam-bidy 20% avy hatrany ianao, mandrakizay. Fa nahoana no tsy?
Fa raha te hisoratra anarana ianao dia ataovy araka ny fombanao fa tsy noho ny nolazaiko taminao na satria nisy lehilahy iray tao amin'ny YouTube nilaza izany tamin'ny lambo tao anaty lavaky ny fiarany. Mitaky risika hatrany ny fampiasam-bola. Tadidinao ve tamin'ny 1929 tany Etazonia? Ireo Tycoons nitsambikina avy tao amin'ny trano afrikanina dia mpamatsy vola avokoa. Nilalao mafy izy ireo, efa nanao risika be, ary noho izany dia mety hahavery be. Saingy ny fampiasam-bola dia tokony ho saika ara-tsiansa, raha ny hevitro indrindra eo amin'ny sehatry ny drafitra: tsy afaka mampiasa vola mihoatra ny zakanao very ianao. Lalao mampidi-doza io, tsy maintsy hainao ny milalao. Tsy mpanolotsaina ara-bola aho, ary tsy hanana fahalalahana hanoro hevitra anao handany ny volanao.
Mandika ny fanamarihako aho, izay ihany. Azoko atao amin'ny notepad, amin'ny moleskine izany, apetraho eo ambanin'ny hazo toa an'i Goethe aho ary tazomy ho ahy ity fampahalalana ity. Fa nandinika an'ity fampahalalana ity tamin'ny Internet aho .. fotoana tokony hamerenako zavatra. Raha mahasoa anao ireo teniko ireo dia faly aho. Aza manambola na inona na inona anefa satria misy olona amin'ny Internet manoro hevitra azy.
Fitsipika sy vanim-potoanan'ny hetsika
Loka vaovao ho an'ny mpanao mofo vaovao: $ 50 avy (mpandresy 200 manontolo)
Valisoa ho an'ireo mpanao mofo mpanao vintana: 20.000 20 $ handresena! (Mpandresy XNUMX amin'ny fitambarany)
Tsy misy olona very loka: Takio ny anjaranao $ 22.200 amin'ny lokan'ny loka BTC
Loka ao amin'ny Binance 2021 Bitcoin Pizza Day NFT fanontana voafetra
Ahoana no handresenao?
Ahoana no ahafahako manangona ireo akora?
Mizarà amin'ny media sosialy hahitana akora fanampiny
Hanatanteraka Hiditra amin'ny Binance hijerena ireo akora voaray
Ny fe-potoana varotra dia manomboka amin'ny 19 Mey 00:00 AM (UTC) ka hatramin'ny 25 Mey 2021 11:59 PM (UTC).
Ireo mpampiasa mahay rehetra izay smisoratra anarana kaonty Binance aho mandritra ny vanim-potoanan'ny hetsika ary mahandro ny pizza Bitcoin (manangona am-pahombiazana ireo akora manokana dimy) dia hanana fotoana handresena $ 50 amin'ny mari-pamantarana BTC amin'ny alàlan'ny fisarihana vintana (Lucky Draw - https://www.binance.com/en/support/faq/fd462f034aed44439ef6c636b9aaf345).
Ireo mpampiasa mahay rehetra (ankoatry ny mpandresy New Baker Reward) izay nahandro nahandro ny Bitcoin Pizza (tamin'ny fanangonana ireo singa dimy manokana) nandritra ny vanim-potoanan'ny hetsika dia hanana fotoana handresy $ 1.000 amin'ny mari-pamantarana BTC amin'ny alàlan'ny Draw Lucky.
Ireo mpampiasa mahay rehetra izay tsy mandresy amin'ny valisoa New Bakers Reward na Lucky Bakers Reward dia hizara $ 22.200 amin'ny BTC. Ny fizarana valisoa dia hikajiana mifototra amin'ny volan'ny varotra mifanentana isaky ny mpampiasa mendrika mifanaraka amin'ny totalin'ny varotra ampiasain'ny mpampiasa mendrika rehetra.
Kajy ny valisoa
Ny valisoa BTC isaky ny mpampiasa mahay dia mitovy amin'ity paikady ity: (totalin'ny varotra mahomby amin'ny mpampiasa tsirairay / ny habetsahan'ny varotra mahomby rehetra an'ny mpampiasa mahay rehetra) * Loka totalin'ny $ 22.200 ao amin'ny BTC
Ireo mpampiasa mahay rehetra izay manangona ireo singa dimy manokana ary manamboatra ny Bitcoin Pizza mandritra ny vanim-potoana mavitrika dia azo ekena amin'ny fisintomana vintana. Mpandresy roa amby roapolo no hosintonina amin'ny antsapaka ary ho afaka handray ny iray amin'ireo fanontana voafetra NFT amin'ny 22 Jolay 1 (UTC), aorian'ny Binance NFT Fivarotana ofisialy ho velona.
Angony daholo ireo singa dimy manokana momba ilaypejy fanaovana hetsika (ny pejin'ny hetsika) handrahoana ny Bitcoin Pizza. Vita, azonao antoka ny handresy anjara $ 52.200 amin'ny BTC! Tena maso, tsy manazava i Binance hoe inona izany fizarana izany. Mety ho 0,0004 XNUMX% io, fa hoy ny renibeko "tsara kokoa noho ny baoritra atody dia baoritra di atody ".
Fenoy ny varotra farafaharatsiny 100 USDT amin'ny mpivady mahay BTC / USDT tasy sy maridrefy;
NA farafaharatsiny 3.000 USDT na BUSD amin'ny mpivarotra varotra mendrika USDⓈ-M Futures;
NA farafahakeliny fifanarahana 30 amin'ny mpivarotra varotra mahay COIN-M Futures.
Aorian'ny fifanakalozana mahafeno fepetra tsirairay etsy ambony, afaka miditra amin'ny pejy fanaovana hetsika (https://www.binance.com/en/activity/collect) mamaha singa tsy kisendrasendra.
Zarao amin'ny media sosialy ireo akora very ary angataho ny namanao handefa anao ny fanampim-bolany!
Zarao amin'ny tambajotra sosialy ireo akora fanampinyo anao ary amidio amin'ireo izay ilainao amin'ny fandrahoana sakafo ilay Pizza Pizza tonga lafatra.
Ny fepetra sy ny fepetra dia azo zahana amin'ny Binance.